Ekipa Base Iraisam-pirenena any A Coruña - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Ny ekipa iraisam-pirenena any A Coruña
Mpikambana ao amin'ny Ekipa Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena sy ny Ekipa mpanentana ao amin'ny Coruña, tamin'ny Diabe faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana dia tao an-tanàna tamin'ny alarobia 4 martsa.
Ny mpandrindra ny volana martsa, Rafael de la Rubia, niaraka tamin'i Jesús Arguedas, Charo Lominchar ary Encarna Salas, dia nionona tao an-tanànan'i Galiliana maraina maraina izay nihaonany tamin'ny Mpanolotsaina ho an'ny Fanatanjahantena, Jorge Borrego ary ilay mpitondra tenin'ny vondron'ny kaominaly BNG, Francisco Jorquera, niaraka tamin'izy ireo nifanakalo hevitra tamin'ny dia nataon'izao tontolo izao.
Ny tolakandro izy ireo dia nandray anjara tamin'ny fihaonana tamin'ny solontenan'ny vondrona isan-karazany nandray anjara tamin'ny World March: Galicia Aberta, Vangarda Obreira, Movemento Feminista da Coruña, Forum Propolis, Esquerda Unida, Marea Atlántica, Hortas do Val de Feáns, Forum Galisiana momba ny fifindra-monina, , Cuac FM sy Mundo sen Guerras e sen Violencia.
Izy io dia novana momba ny zava-misy eran-tany hita tamin'ny fitsidihan'ny planeta natolotry ny Team Team, momba ny fihaonana amin'ireo vondrona sy andrim-panjakana, momba ny fihaonana miaraka amin'ny Gorbachev Foundation ary ICAN, momba ny tolo-kevitra ho an'ny fihaonana an-tampon'ny Nobel Peace Laureates sy ireo tolo-kevitra vaovao izay nipoitra tamin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny vondrona rehetra.
Natao ny fifanakalozan-kevitra momba ny toe-javatra momba ny fifanarahana momba ny fitaovam-piadiana niokleary ary momba ny filàna fampahafantarana ny mponina ary hanomezana izany fandraisana anjara amin'ny hetsika izany hanamarinana ny fifanarahana.
Farany ny ekipa dia lasa nankany Madrid izay hitranga ny hetsika famaranana ny volana martsa faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Fampahalalana misimisy kokoa: